Loggia nemapuranga zvishandiso
Kuti muvhenji kana loggia isati yashandurwe kuva nzvimbo yekuchengetedza marara, zvakakosha kuvashongedza nesimba. Zvisinei, musati watanga kusarudza firimu, unoda kuziva kuti ndezvipi zvinodiwa kuti uise pamhando yezvinhu zvaunenge waita, uye chii chinzvimbo ichi chichaita mumba mako. Izvi, pakutanga, zvinokanganisa chokwadi chekupenya kwemukamuri ino. Mukuwedzera, zvakakosha kufunga nezvekugadzira zvinhu zvebhokisi uye nzvimbo yaro. Uye chero zvakadaro, midziyo yebhokisi nebhokisi rinofanira kunge rakashanda, rinogadzirisa uye, kana zvichikwanisika, shandura.
Balcony - kuchengetedza nzvimbo
Kana ukaronga kushandisa nzvimbo yebhokisi kuti uchengetedze zvipfeko zvemazuva, midziyo yemitambo, miriwo kana kuti zuva rinosviba, ipapo iwe uchada fani yakakodzera. Makabati emabhakoni uye loggias achakubvumira kuti uise zvose zvakakosha "zvakanaka" pasina kukanganisa maitiro ekutenderera eimba. Usati wazvitenga, unofanira kunyatsoongorora zvose zvingasarudzwa pane zvigadziri zvichachengetwa ipapo kuti utenge hurumende inogona kumira mitoro yakakodzera.
The log cabin inzvimbo yakaisvonaka yekuchengetedza zvinhu zvakasiyana-siyana. Izvi zvinogona kuva magumbezi, mabheji kana zvipfeko zvekare.
Loggia - nzvimbo yekuzorora
Kana iwe uchida kugadzirisa loggia senzvimbo yekuvanda, saka fenicha ichada yakakodzera. Muchiitiko ichi, sofas ye loggia inofanira kunge yakawanda kwazvo, kureva kuti, inofanirwa kuva nevatambi yekuchengetedza micheka yemicheka kana zvimwe zvimwe zvinhu.
Pamusoro pe sofa, unogona kuisa mashefu e loggia, iyo ichava hwaro hwekushongedza mukati meimba yacho nemhando dzakasiyana-siyana dzekushandisa.
Kuvhara tafura yekhofi pedo nefafa kuchaita kuti zororo riwedzere kunakidza.
Uye, chokwadi, usakanganwa kuti pane imwe nzvimbo iwe uchiri kudikanwa kuchengetedza zvinhu zvenguva uye zvinhu. Makabati-mahwindo e loggia anoenderana nezvinangwa izvi pamwe chete. Mushure mezvose, iyi hutabhenakeri inobatanidza kukwanisa uye kubatana. Somugumisiro, iwe uchawana nzvimbo yakagadzikana uye inofadza yekuzorora.
Simba rekamuri nebhokisi rinogona kutengwa rakagadzirirwa, uye rinogona kugadzirirwa kuronga kana kuzvimirira, izvo zvinowedzera kushandiswa kwemakiromita masere emakamuri ediki. Imba yakanyatsofungidzirwa ye loggia kana bhakoni ichavapa ivo pachavo uye inoita nzvimbo yakanaka uye inofadza.
Nechomukati yeimba yekuratira mune imwe nzira yekuita
Nzira yekugadzira machira?
Akabatanidza rusvingo-pepa yekamuri yekugadzira - chigadzirwa
Kupedza chivanze ne gypsum plasterboard
Panels in the bathroom
Kurara-muimba yekuvata - kugadzira
Porcar Polybonate porch
Moldings for plailing
Kuisa imwe imba yeimba yeimba ine mwana
Pombi yeplasitiki mukicheni
Soup - solyanka - recipe
Kusiyanisa panguva yekuberekwa
Zvigadzirirei kumuchato kumwanakomana
Pomegranate crusts - yakanaka uye yakaipa
Girazi mukati mekugadzira - mazano anhasi
Nei hove dzichifira mumvura?
Chokwadi chinofadza pamusoro peMonaco
Kuziva mupfungwa Kim Kardashian pamusoro pokubavha kwakanyanya kuwedzera kukosha kwemhuri kuratidza
Mascara pamwe nemafuta eyelashes venhema
Kurera komwana wemakore mana
Nzira yekupemberera Sei Krisimasi?
Nzira yekusarudza chigamba?
Kugadzirira pepuri mbeu yekudyara mbeu - ndeipi nzira dzinovimbiswa kuwedzera mbeu kumera?
Dropsy yevakadzi vane pamuviri
Style eclectic mukatikati - mazano anobatsira ekugadzirwa kwekugadzira